Payment opareta mutsetse anoramba Bitcoin - Blockchain News
Payment Processor mutsetse Kupedza Kutsigira Bitcoin
The muripo opareta mutsetse akazivisa kuti achasiya bitcoin mukati inotevera mitatu uye zvachose kusiya pamusoro April 23. Izvi yakamhan'arirwa chigadzirwa maneja Tom Carlo mune chekambani pamutemo Blog.
Mutsetse vakatanga kutsigira bitcoin kwema mu 2015, kupa kuwana mubhadharo mu BitCoins kweanopfuura 60 nyika. zvisinei, refu nguva mutengapwe kugadzira, kuwedzera uwandu kundikana kwema uye kukura kupomera bitcoin zvishoma akakurumbira pakati mutsetse vanoshandisa: “Bitcoin ari kurasikirwa kukosha vanoshandisa dzedu. Kushandira zvokutengeserana Makambani akatanga kugamuchira zvishoma kwemari kubva bitcoin, “- anoti Carlo.
Tom Carlo akacherechedza kuti mutsetse “ramangwana anotarisa crypto-mari zvavo” uye, dzimwe nguva, mune ramangwana achatsigira zvakawanda altcoins, kusanganisira akatisiyira, kana mari hunowedzera dzakakurumbira. Pamusoro pe, anoona maonero mumabasa akadai Mheni, OmiseGO, Ethereum, Bitcoin Cash uye Litecoin.
Vazhinji rezvebonde vanozvishandisa vakatsigira basa mhinduro:
Bitcoin kukuru, echimurenga kunyange asi pane nokukurumidza, isingadhuri uye zvakawanda-chinja #cryptocurrencies ikoko zvino. Ndiyo nguva kuti nzira zvevana itsva pamusoro chinogumbura # StellarLumens #Ethereum
Kunyange zvazvo vamwe funga izvi pfupi anoona zvakanaka chiito pamusoro avaida Moto nemamwe scalability negadziriso nokuti Bitcoin Network, vanozvishandisa vazhinji vachiri kudavira kuti pane cryptocurrencies zhinji kuti anogona kukwikwidzana bitcoin.
Hapana nzira kupa ichi mutsetse nhau sezvo akanaka. Tiri kukuudza zvose mangwanani adopter vatengesi kuti vakazviita "nzira zvakaipa" uye zvino kuti retool kuwedzera mheni Network. Asi havasi. Havasi kutamira Bitcoin mari (kana zvimwe) kana. Vari kusiya
Regai chamupidigori garikuni ichi se "haizi zvaireva kuti vachibhadhara zviri zvimwewo", zvinoreva tinotofanira kumirira kusvikira mararamiro akagadzirira zvakare uye ipapo Te-kundoparidza wose kechipiri apo mari yakaderera zvakare. Pachirehwa mari zvose, ethereum haasi "akagadzirira" kana.
The chinogumbura muganhu kunge akamutsa makore maviri apfuura, chero ichi asati vakava matambudziko chaiwo, uye taitofanira Ndatenga nguva. Asi vamwe vanhu FUD'ed pamusoro zvekufungidzira matambudziko ramangwana kutengesa chigadzikiso ramangwana kuti haana kugadzirira uye akasika huru nyaya chaiyo iri chipo. /rant
Alex ari Sande @avsa
In mangwanani December, ari bitcoin-kubhadhara vakanga rakadzika nokuda Steam mutambo basa. Uyewo kuchinja kubva Ethereum nechigumbuso kuna akatisiyira akanga atozivisa kuti CEO pamusoro vakaverengwa nhume Ted Livingston. Maererano naye, Ethereum “anoedza kuva zvose kumunhu wose”, zvakare migweje uye haachatyi anogutisa zvinodiwa nokushanda 10,000 vanozvishandisa.
Ndiani John Hyman, kana chii chatinoziva pamusoro teregiramu inivhesitimendi chipangamazano
Blockchain News 20 Ndira 2018
Tether nguva pp ...
Kutangira Feb 28...
Coinbase anowedzerawo kuti ...
Previous Post:Robotrading kana Chinyorwa Trading
Next Post:Blockchain News 25 Ndira 2018